Shell Heat Transfer Oil S2 - TA Resources Myanmar
Technology – Mineral
Standards –Classified as ISO 6743-12 Family Q,Meets DIN 51522 requirements
Description –စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Heat Transfer ဆီ
Shell Heat Transfer Oil S2 သည် indirect closed fluid အပူကူးစနစ်များတွင် ကောင်းမွန်သည့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်စေရန် အထူး ရွေးချယ်သန့်စင်ထားသည့် mineral အခြေခံဆီကို အသုံးပြုပြီး ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
Shell Heat Transfer Oil S2 သည် အထူးရွေးချယ်ထားသော သန့်စင်သည့် mineral oils ဖြင့်အခြေခံထုတ်လုပ်ထားပြီး၊ ဆီသားပြိုကွဲခြင်း၊ အောက်ဆီဒိုက်ဖြစ်ခြင်း၊ ဆီသားထူလာခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ဆီသက်တမ်းရှည်ကြာစေခြင်း၊ ကောင်းမွန်သည့် fluid heating ကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ ပန့်လည်ပတ်ခြင်းကို သေချာကောင်းမွန်စေခြင်း စသည်တို့ကို ရရှိစေပါသည်။ Heater မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ဆီသားအပူချိန်ကို သတ်မှတ်ချက်ထက် မကျော်လွန် စေပါ။
စေးပြစ်ကိန်းလျော့ နည်းခြင်းသည် များပြားသည့် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုများ၌ အလွန်ကောင်းမွန်သည့် ဆီစီးဆင်းမှုနှင့် အပူကူးပြောင်းမှုကို ရရှိစေပါသည်။ Shell Heat Transfer Oil S2 သည် ဆီသားပြိုကွဲမှု ကိုကာကွယ်နိုင်သည့် နိမ့်ပါးသည့် vapour pressure ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် expansion chamber နှင့် condensate collector ကြားမလိုအပ်သည့် ပြောင်းလဲ၊ပျက်စီးစေသည့် အရာများဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို လျော့ချပေးပါသည်။
Shell Heat Transfer Oil S2 သည် ပွန်းစားမှုမရှိစေဘဲ၊ မြင့်မားသည့် Solvency ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် အောင်ဆီဒိုက်ဖြစ်စေသည့် ပစ္စည်းများကို solution ထဲရှိနေစေပြီး အညစ်အကြေးများဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို လျော့ချပေးကာ၊ heat exchanger ၏အတွင်းမျက်နှာပြင်များကို သန့်စင်စေပါသည်။
Process industry ၊ chemical plant ၊ textile producers များကဲ့သို့သော စက်ရုံများရှိ အပိတ် heat transfer စနစ်များနှင့် အိမ်သုံးပစ္စည်းများဖြစ်သည့် oil filled radiators များ၌လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Shell Heat Transfer Oil S2 ကို အောက်ပါ အသုံးချမှုသတ်မှတ်ချက်များရှိသော မြင့်မားသည့် အပူချိန်ဖြင့် အဆက်မပြတ် လည်ပတ်သည့် heat transfer equipment များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။Max. film temperature : 320 °C
Max. bulk temperature : 300 °C
Classified as ISO 6743-12 Family Q
စက်ပစ္စည်း ထောက်ခံချက်အပြည့်အစုံအတွက် သင်၏ ပြည်တွင်း Shell Technical Helpdesk နှင့် ဆက်သွယ် အကြံဉာဏ် ရယူပါ။
Shell ကိုယ်စားလှယ်ဆီမှ ရယူနိုင်ပါသည်။